Wararka - Rugao wuxuu dib u habeyn ku sameynayaa 4 waddo oo ay leedahay dowladda hoose oo leh nalal waddo ku shaqeeya oo cadceedda ku shaqeeya
Rugao wuxuu dib u habeyn ku sameynayaa 4 waddo oo dowladda hoose ay ka kooban tahay nalalka cadceedda ee loo yaqaan 'LED LED'
Mashruuca dayactirka nalalka LED-ka ee nalalka Zhongshan East Street ee magaalada gudaheeda ayaa la dhihi karaa waa mashruuc matalaya horumarka cagaaran ee degmada Rugao. Wadadani markii hore waxay u isticmaashay laambadaha sodium-ka iftiiminta. Si kor loogu qaado nalalka dhaqaale, 240W nalalka waddada cadceedda ee LED -ka ayaa beddelay 294 500W laambadihii sodium, iyo 120Wnalalka waddada cadceedda ee LEDbeddeshay 154 250W laambadihii sodium. Celceliska heerka keydinta korontada waa 65%, taas oo keydisa 440,000 kWh sanadkii. Kaydso in ka badan 390,000 yuan biilasha korontada.
Ka dib markii laambadda waddada LEDisbeddelka, celceliska iftiiminta dusha waddada ayaa gaadhay 1.5 jeer celcelis ahaan iftiiminta laambadda sodium ee asalka ahayd. Nolosha laambadda oo in ka badan 50,000 oo saacadood aad uga fog nolosha laambadda sodium 8,000 saacadood. Wakhtiga damaanad -qaadka dheer ee 5 illaa 6 sannadood ayaa la xaqiijiyey, kaydinta korontada sannadlaha ahi waa 2.685025 milyan oo kilowatt saacadood, Badbaadinta 2.368192 milyan yuan ee kharashyada korontada, dhimista qiiqa CO2 ee 1022.99 tan iyo badbaadinta 886.06 tan oo dhuxul caadi ah.
ilaalinta, ilaalinta qaraxyada, iyo iswaafajinta electromagnetic.
Henning Helmers, oo ah madaxa kooxda cilmi-baarista, ayaa yiri: “Habkan filim-dhuuban wuxuu leeyahay laba faa’ido oo muuqda marka la eego wax-ku-oolnimada. Marka hore, sawir -gacmeedyadu waxay ku xayiran yihiin unugga si ay u kordhiyaan nuugista tamarta sawir -qaadaha ee u dhow farqiga kooxda. Isla mar ahaantaana, tan Luminta kulaylka iyo luminta gudbinta ayaa la yareeyaa, taas oo ka dhigaysa batteriga mid waxtar leh. Marka labaad, fotonnada gudaha ee ka dhasha dib -u -soo -ururinta shucaaca ayaa la qabtaa oo si waxtar leh loo faafiyaa. Tani waxay sii dheereyneysaa nolosha wax -ku -oolka ah ee wax ku oolka ah waxayna sii kordhineysaa korantada.
Andreas Bett, Agaasimaha Machadka Cilmi -baarista ee ISE, ayaa yiri: “Gudbinta tamarta iftiinka waxay leedahay codsiyo badan. Tusaale ahaan, kormeerka qaab -dhismeedka marawaxadaha dabaysha; kormeerka xariiqa-danab sare, dareemayaasha shidaalka ama shabakadaha indhaha ee dadban ee haamaha shidaalka diyaaradaha; Bixinta indhaha ee maqaar -galaha dibadda ama Bixinta awoodda wireless -ka ee codsiyada IoT. ”
Sida laga soo xigtay warbixinnada, bishii Abriil 2021, cilmi-baarayaasha ISE waxay gaareen wax-ku-beddel beddelaad ah 26% oo loogu talagalay xiriirinta laba-geesoodka unugyada qorraxda silikon, rikoor.
Mercom ayaa hore u sheegtay in III-V/Si tandem solar cell oo si toos ah loogu soo saaray silikon -ka cilmi -baarayaasha ISE ayaa dhigay rikoodh wax -ku -ool ah oo ah 25.9%.
Waqtiga boostada: Jul-16-2021